'खडे सर'को नैतिकता - Jagaran Post 'खडे सर'को नैतिकता
‘खडे सर’को नैतिकता
जागरणपोस्ट १८ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १३:३०
त्यो बेला नैतिक शिक्षा भन्ने एउटा पातलो पातलो किताब प्राथमिक कक्षाहरूमा पढाई हुन्थ्यो । हाम्रो नैतिक शिक्षा पढाउने गुरुको नाम चाहिँ खडे सर थियो । पूरा नाम – खडानन्द खनाल भएपनि, नैतिकताको शिक्षा, नैतिक गुरु खडे सर का नामले प्रसिद्ध थिए । तर, खडे सरका नामले प्रसिद्ध भएपनि, नैतिक शिक्षाका गुरु ,कहिल्यै पनि राम्रोसँग खडा हुन भने सक्दैनथे । एकाबिहानै चियाको ठाउँमा, स्वाट्टसँग सिया हानेर हल्लिन सुरु गरिहाल्थे । अनि एघार बजेतिर, राता राता आँखा , ठुस्स गनाएको मुख र खडा हुन संघर्ष गरिरहेका दुई खुट्टा लिएर, नैतिक शिक्षा पढाउन , खडे सर कक्षामा आउँथे। अनि काँपीरहेका हातले दस मिनेट लगाएर कालोपाटीमा “ नैतिक शिक्षा“ लेख्थे ।
यति लेखिसकेर मडुवा खैनी निकाल्दै र चुना मिसाउँदै लर्बरिएको स्वरमा आदेश जारी गर्थे ।
“ सन्ते ! आजको पाठको शीर्षक ठूलो स्वरमा सबैले सुन्ने गरी वाचन गर ।“
म जुरुक्क उठ्थे र ठूलो स्वरमा शीर्षक पढ्थे – “ धूम्रपान/ मद्दपान र सुर्ती सेवनका असरहरु “
बिहानै जाँडले टिल्ल परेका खडे सर , शिर्षक सुनेर एउटा झुसिलो डकार डाकार्थे र खैनीको घान हालेर पिचिक्क भुँइमा थुक्थे । अनि पढाउन सुरु गर्थे ।
“ जाँडरक्सी र खैनी चुरोट सेवन गर्नु हुँदैन । यस्ता चिजको सेवनले मानिसको स्वास्थ्य र सामाजिक प्रतिष्ठा दुबैको क्षय हुन्छ । “
यती एक लाईन पढाइ सकेर ,खडे सर , फेरि एकपटक डकार्थे । अनि उनले सेवन गरेको जाँड, कक्षाकोठाको वातावरणमा एक पटक ठुस्ससंग गनाउथ्यो । तर खडे सर , आफ्नो उहि लर्बरिएको स्वरमा, नैतिक शिक्षा जारी राख्थे ।
“ समाजले जाँड खाने मान्छेलाई राम्रो भन्दैन । खैनी चुरोट खानेलाई असल मान्छे गन्दैन । जाँडरक्सी र खैनी चुरोटले अनावश्यक धनको व्यय हुन्छ र स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गर्दैन । त्यसैले यस्ता अम्मलीहरुलाई अनेकौं रोग लाग्ने धेरै सम्भावनाहरु हुन्छन ।
“ कुरा बुझेउ ? “
“ बुझिम सर ।“
“ तैंले बुझिस सन्ते ? “
“ बुझे सर । “
“ के बुझिस ? “
“ जाड रक्सी र चुरोट खैनी खान हुँदैन भन्ने बुझे सर ।“
खडे सर जवाफ सुनेर फेरि एकपटक ढ्याउ गर्थे । एक घान थुकेर खैनीको अर्को घान हाल्थे । अनि पिचिक्क थुकेर भन्थे ,
“ स्याबास ।“
खडे सरले यसरी नै एकदुई वर्ष अरु पढाए होलान् ।
हामीले यसरी नै नाका थुनेर अरु एक दुई वर्ष पढेको सम्झना छ । त्यसपछि भने खडे सर, खडा हुन सकेनन् । एक साँझ स्कूल सकेर हिंडेका खडे सर, नालीमा खडा नभएको अवस्थामा फेला परे । अनि उनको कथा सकियो ।
उनी बिस्तारै स्मृतिबाट हराएर गएछन । अनि मैले पनि उनलाई बिर्सी सकेको रहेछु ।
तर हिजोआज नेपाली राजनीतिमा छ्यापछ्याप्ती खडे सरहरु खडा भएर, नैतिक शिक्षा पढाएको देख्दा, उनै नैतिक शिक्षा पढाउने खडे सर फेरि स्मृतिमा एकपटक ताजा भएर उदाए । म फेरि,उबेलाका खडे सरलाई मात ख्वाउने , गज्जब गज्जबका खडे सरबाट नैतिक शिक्षा लिन बिबश भए ।
रामकुमारी खडे सर ।
माकुने खडे सर ।
पुष्पकमल खडे सर ।
विना मगर खडे सर । र अरु तमाम खडे सरहरु चिच्याई चिच्याई मलाई नैतिक शिक्षा दिई रहेका छन । म उसैगरि चुपचाप उनिहरुबाट नैतिक शिक्षा लिइरहेको छु ।
तर आज मलाई बोल्न मन लागेको छ । चिच्याउन मन लागेको छ ।
खडे सर………… !
सवाल नैतिकताको होइन गुरु । समस्य नैतिकतासँग पनि हैन । सवाल खडे सरको नैतिकताको चाहिँ हो ।
खडे सरले नैतिकता माथी दिने प्रवचनको हो ।
कुरो तपाईंको हो, खडे सर । समस्या , नैतिकतासंग होईन ।
समस्या तपाईंको गनाउने मुखले अपबित्र तुल्याएको नैतिकताको हो सर ।